आइप्रोका फिचर फोन भित्रिए नेपाली बजारमा ! यस्ता छन् विशेषता « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
आइप्रोका फिचर फोन भित्रिए नेपाली बजारमा ! यस्ता छन् विशेषता
२३ फाल्गुन २०७७, आईतबार ००:००
भीएस ग्रुपले नेपाली बजारमा आईप्रोका फिचर फोन उपलब्ध गराएको छ । भीएस ग्रुपले आईप्रोका फोनहरू आधिकारिक रूपमा नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको हो ।
आईप्रोका फिचर फोनको बिक्री-वितरण सन् २०१९ जुलाई देखि प्रारम्भ भए पनि आधिकारिक रूपमा लन्च गरिएको थिएन ।
पहिलो चरणमा कम्पनीले आईप्रोका सीमित मोडलका फिचर फोनहरू मात्र बिक्री गर्नेछ भने भने बिस्तारै अन्य डिजाइनमा फोनहरू उपलब्ध गराउने छ ।
कम्पनीले नेपाली उपभोक्ताहरूको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर आईप्रोका फिचर फोन मोडलहरू ल्याउन लागेको हो ।
काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा मुख्य कार्यालय रहेको आईप्रोले आफ्नो सेवा पूर्व देखि पश्चिम नेपालसम्म दिन सफल भएको छ ।
भीएस ग्रुपले आफ्नै मोबाइल ब्रान्ड क्यान्भास नेपाल समेत उपलब्ध गराइरहेको छ । सो ग्रुपले क्यान्भास मोबाइल नेपाल भनेर आफ्नो पहिचान गराउने गरेको छ ।
सन् २०१५ देखि भीएस ग्रुप अफ कम्पनिजले विभिन्न सेवा प्रदान गरिरहेको छ । हाल आईप्रो मोबाइल ब्रान्ड बाहेक ग्रेट एसिया ट्याब्लेट समेत यही ग्रुपले बिक्री-वितरण गरिरहेको छ ।
आईप्रो सस्तो, भरपर्दो र टिकाउ फिचर फोन हो । साधारण र निम्न आय हुने व्यक्तिहरू तथा ठुला कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउनका लागि यसको उपयोग गर्न सक्छन् ।
जस्तोसुकै स्थानमा पनि राम्रो नेटवर्क दिने र लामो समय सम्म ब्याट्री टिक्ने भएकाले यी फिचर फोन निकै नै उपयोगी छन् ।
नेपालभरका विभिन्न स्थानमा डिलर र सर्भिस सेन्टर उपलब्ध भएकाले यसका लागि बिक्री पछिको सुविधा समेत प्राप्त गर्न सहज छ ।आईप्रोका फिचर फोनहरूमा ड्युअल सिम, वायरलेस एफएम, क्यामेरा, मेमोरी कार्ड थप्न सकिने सुविधा, भिडियो रेकर्ड गर्न सकिने सुविधालगायतका विशेषता हुनेछन् ।
आईप्रो एक चाइनिज मोबाइल फोन उत्पादनकर्ता हो । जसको आफ्नै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रविधि छ । संसारका धेरै देशमा यसको उत्पादन हुन्छ । सन् २००१ देखि यी फोन बजारमा उपलब्ध छन् । कम्पनीको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट क्षेत्रमा ३ हजार भन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत छन् । यसले गर्दा नै आईप्रोले विश्व स्तरीय बारफोन उत्पादन गर्न सफल भएको छ ।
कम्पनीले फिचर फोन, स्मार्टफोन, रग्ड फोनसहितका उत्पादनहरू बिक्री गर्दै आएको छ ।आगामी दिनमा आईप्रोका धेरै मोडलहरू समेत नेपाल ल्याउने र चाँडै नै स्मार्टफोन समेत ल्याउने तयारी गरेको छ ।
नेपाली बजारमा आईप्रोका फिचर फोनहरू ९ सय देखि १० हजार रुपैयाँ मूल्य सम्ममा उपलब्ध छन् ।
अमेरिकी र युरोपेली बजारमा आईप्रोका फोनहरू निकै रुचाइएको छ । आईप्रोले आफ्ना मोबाइल फोनहरू भारत, मलेशिया, इण्डोनेशिया, ल्याटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका र युरोपमा १०० भन्दा बढी देशहरूमा बिक्री गरिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: Mar 7, 2021
छिमेकी देश भारतले ओटीटी प्लेटफर्म लगायत सामाजिक संजाल नियमन गर्न कडा कानुन ल्याउन लागिएको छ
एप्पलका ३० हजार कम्प्युटरमा रहस्यमय भाइरस आक्रमण
बिश्वभरका झण्डै ३० हजार एप्पल कम्पनीका कम्प्युटरमा रहस्यमय भाइरस आक्रमण भएको एक अनुसन्धानले जनाएको छ
तयार भयो मोबाइल मनी एप, अब टेलिकमका फाेन नम्बर नै मोबाइल वालेट
नेपाल टेलिकमको सहायक कम्पनीले मोबाइल भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक मोबाइल एप तयार गरेको छ
अमेरिकी प्रतिबन्धसँग जुझिरहेको चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेले फोल्ड गर्न मिल्ने मोबाइल फोन सोमबार सार्वजनिक गरेको
भायानेटले ‘भयंकर अफर’ सार्वजनिक, ८ सय मै नेट र टिभी च्यानल
भायानेटले ग्राहकहरुलाई ‘भयंकर अफर’ सार्वजनिक गरेको छ ग्राहकहरुलाई किफायती मूल्यमा उत्कृष्ट इन्टरनेट प्रदान गर्नको लागि